Umbhalo Ofihlekile Nezixhumanisi: Ingabe Banda Ngokwandisa I-SEO Yakho? - Uchwepheshe We-Semalt, uNatalika Khachaturyan Unika Impendulo
Imibhalo efihliwe kanye nezixhumanisi zakha okuqukethwe kwewebhusaythi yakho eseduze noma engabonakali kubantu abalayisha leli khasi. Kubantu abenza isikhwama esimnyama se-SEO, imibhalo efihliwe yindlela iningi lemihlahlandlela ye-webmaster idelela. Noma kunjalo, lokhu okuqukethwe kungabonwa ngamakhompyutha, ngakho-ke iyingxenye yamagama angukhiye wokukhomba. Umbhalo ofihliwe ukhohlisa izinjini zokusesha ukukala ulwazi lwewebhusayithi okungenzeka lingabi yingxenye yokuqukethwe kwekhasi lewebhu elibonakalayo.
Ukulandela isibuyekezo esisha ku-algorithm yokusesha, i-Google manje ithola umbhalo ofihliwe. Iwebhusayithi yakho ibeka ingozi yokuthola inhlawulo kusuka kusayithi yokucinga. Ezimweni ezimbi, elinye igama eliyisihluthulelo lokufaka ama-spac tactics kungaholela ekuqedeni okuphelele ku-database ye-search engine. I-Strategist ye-Content Semalt , uNatalika Khachaturyan, uxwayisa ukuthi esikhathini esedlule, amanye amawebhusayithi angakwazi ukuphakamisa phezulu ngokusebenzisa leli qhinga kodwa engasekho.
Le ndlela ekhohlisayo ingafaka okuqukethwe komsebenzisi ekhasini lewebhu ngefomu elingabonakali. Kubantu abaqhuba ukuSebenza injini yokusebenza, umbhalo ofihliwe awusakwazi ukusiza noma yikuphi iwebhusayithi ukuthi ibeke isikhundla njengoba itholakala kalula. Ayinayo ithonya ku- isikhundla sewebhu sanjengaphambili. Indlela eyodwa abantu abangayisebenzisa ukuveza okuqukethwe okufihliwe ngokugqamisa ikhasi lonke. Uma ucindezela" ctrl + A, "ukhetha konke kufaka phakathi okuqukethwe okufihlekile. Kungabonakala ngokugqamile lapho ungayikhophi futhi uyihlanganise kwenye indawo yokuhlunga.
Kunamasu amaningi abantu abangawasebenzisa ukufihla umbhalo ekhasini lewebhu. Okokuqala, abanye abantu bangasebenzisa imibhalo enombala ofanayo ngemuva. Ngenxa yalokho, lolu lwazi alubonakali kumuntu obuka ikhasi lewebhu. Abanye abantu basebenzisa amafonti amancane ezindaweni zewebhusayithi lapho kunebhanner noma ulwazi olwengeziwe. Ukufihla idatha ngekhodi noma into kungabuye inikeze umbhalo wewebhusayithi njengfihliwe.
Izixhumanisi ezifihliwe zenzeka njengemibhalo efihliwe, ngaphandle kokuthi kunezimvume ezikuzo. Ngenxa yalokho, umsebenzisi wewebhusayithi angakwazi ukubona izindawo ngezixhumanisi ezicacile ezingacacile noma ezibonakalayo. Izixhumanisi ezifihliwe azihlanganisi ukusebenza kwe-website ye-SEO. Ukuxhumeka kwabo akuvumeli ijusi lokuxhumanisa ukwengeza igunya kwisizinda. Ngaphezu kwalokho, isayithi lingase libe nesigwebo esinqunyiwe lapho ama-crawlers we-injini ye-search engine ekhomba izixhumanisi eziningi ezifihliwe.
I-website efana nezingosi ze-e-commerce ukwenza kahle kuleso simo, kunesidingo sokufaka okuqukethwe okubonakalayo kunalokho okungabonakali. Yonke imibhalo ekhona ekhasini lakho lewebhu kufanele ibonakale kumsebenzisi. Kumele futhi kwenzeke ukuthi zonke izixhumanisi zibonakale. Ukuze uhlole okuqukethwe okufihliwe ekhasini lewebhu, ungakwazi ukugqamisa konke nge-ctrl + A umsebenzi noma usebenzise isikhombisi. Ezimweni lapho okugqamile kunombala ofanayo ngemuva, cindezela i-ctrl + C bese unamathisela lokho okuqukethwe kwekhasi lesofthiwe yokucubungula igama usebenzisa inketho yokunamathisela kuphela. Ungakwazi ukuhlela okuqukethwe kanye nezixhumanisi ezifihliwe ezibonisa njenge-permalink.